Author: Murisar Tataur
Tusmada Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada. Waxbarashada Dhallinyarada iyo Isboortiga. Horumarinta Cilmiga iyo Suugaanta Hiddaha iyo Dhaqanka. Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka. Daryeelka Qaybaha Bulshada Baylahsan. Shaqada, Farsamada, Daryeelka iyo Badbaadinta Shaqaalaha. Xorriyadda Dhaq-dhaqaaqa iyo Is-abaabulka. Xuquuqda Qofka Xorriyadda laga qaaday. Xaqa Dacwadda iyo lsdifaaca. Waajibaadka Muwaadinka iyo Ciqaabta Gudasho La’aanta.
Isu Celinta Eedaysanayaasha Ama Dembiilayaasha iyo. Awoodda iyo karaamada Qaranka. Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Tilmaanta Guud ee Golaha. Tirada Golaha iyo Doorashadusa. Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada.
Muddada Xilka iyo Xilliga Doorashada. Kal-fadhiyada iyo Habaynta Golaha Wakiilada. Mushaharka iyo Gunnada Golaha Wakiilada. Reebbanaanta Qabashada Xil Kale.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Wakiilada. Waayidda Xubinimada Golaha Wakiilada. Buuxinta Jagada Golaha Wakiilada. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Wakiilada. Awoodda Xeer-dejinta ee Golaha Wakiilada. Kala Diridda Golaha Wakiilada. Tilmaanta Guud ee Golaha Guurtida. Doorashada Xubinta Golaha iyo Muddada Cysub. Shuruudaha Qofka bo Dooranayo Golaha Guurtida. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Guurtida. Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida.
Xoghayaha Golaha iyo La-taliyayaal. Mushaharka iyo Gunnada Golaha Guurida. Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida.
Shaqo-ka-tegidda Xubinta Golaha Guurtida. Waayidda Xubinimada Golaha Guurtida. Bannaanaanshaha Jagada Golaha Guurtida iyo soo Buuxinteeda. Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka. Habka loo Raaco Xeer-dejinta.
Mashruuc-sharci kasta aan ahayn kuwa Maaliyadda. Madaxweynaha iyo Madaxweyne Ku-xigeenka. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha. Waxyaabaha ka Reebban Madaxweynaha.
Habka Buuxinta Jagada Bannaanaatay. Hab-maamuuska Madaxda Sare ee Qaranka. Awoodda Garsoorka u Gaarka ah. Maxkamadaha Ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda. Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka. Golayaasha Gobollada iyo Degmooyinka.
Hay’adaha Dawadda ee Gaarka ah. Guddida Culimada iyo Waajibaadka Guddida.
Tirada Guddida iyo Muddada Xilka. Waxyaabaha ka Reebban Xubnaha. Magacaabidda Xubnaha Guddida Culimada. Bannaanaanshaha Xubinimada Guddida Culimada. Ciidamda Booliska iyo Asluubta. Wax-ka-beddelka adstuurka Kaabidda Dastuurka.
Xuduudda Wax-ka-Bedelka iyo Kaabidda Dastuurka. Saldhigga iyo Sarraynta Dastuurka. Dhaqan-gelinta Dastuurka iyo Qodobada kala guurka. Go’aan qaadasho ku timaadda talo-wadaag.
Isu-dheellitirrnaanta awoodda dawladnimo oo u qaybsanta; Sharci-dejinta, Fulinta iyo Garsoorka. Darnmaanad-qaadista lahaanshaha gaar ahaaneed iyo xaq dhowridda suuqa xorta ah. Qiimo-weynida nolosha qofka oo Ia imanaysa sugidda xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyadaha qofka.
Nabadgelyo iyo habsami kula dhaqanka dawladaha gobolka iyo adduunweynaha. Awoodda iyo karaamada Qaranimada waxa leh shacbiga; wuxuuna u adeegsanayaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale. Dalka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu fidsan yahay bed Area ahaan dalkii Pentlaand odhan jirey Maxmiyadda Somaliland oo tilmaan ahaan ku yaalla dhigaha Latitude 50 ilaa 30′ Waqooyiga Dhulbadhaha iyo loolka Longtitude 45′ ilaa Bariga; waxaanay soohdimihiisu ka kooban yihiin berriga 1 jasuradaha, biyaha gobolleed, dhulka iyo badaha hoostooda, dastyurka sare iyo xeebleyda Continental shelf.
Pentlanx Qaranku waa muqaddas; waana laguma xad gudbaan. Magaalo-madaxda Jamhuuriyadda Somaliland waa Hargeysa. Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka.
Somaliland 26kii Juun k iyo ka hor, waxa loo aqoonsanayaa muwaadin. Xeer baa caddaynaya sida lagu heli karo ama laga waayi karo jinsiyadda Somali land. Diinta Qaranka Somaliland waa Fastuurka lslaamka; waxaana geyiga Somaliland ka reebban faafinta diin aan ahayn Diinta lslaamka. Xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa Shareecadda lslaamka; waxaana reebban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda.
Dawladdu waxay oogaysaa shacaa’irta dimiga ah umuurta Diinta ; waxaanay fulinaysaa axkaamta Shareecadda. Dastukrka kale waxay ka hortegaysaa fisqiga iyo anshax- xumada. Tirsiga taariikhda waxa laga raacayaa tan lslaamiga ah ee Hijriyada iyo tan Miilaadiyada ah.
Afafka kale waxa loo adeegsan karaa wixii looga maarmi waayo. Calanka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka kooban yahay saddex midab oo isle’eg oo ballaadh u goglan. Midabka sare waa Doog, dhexdiisana ay ku qoran tahay Laa-llaaha llla-Lahu Muxamedu Rasuul-Allaah oo Far-Carabi ah, oo midab cad ah; midabka dhexe waa caddaan pfntland badhtanka kaga taallo xiddig madow oo shan geesley ah, madaxyo simanna leh; midabka hoose waa casaan saafi ah. Laba caleemood oo doog ah dasruurka hoosta iyo penhland kaga wareegsan Galaydhka; labada caleemood baarkooda inta u dhaxaysa waxa ku qoran “Bisinka” oo Far Carabi ah.
Heesta Qaranku waa mid muujinaysa bartilmaameedyada Dastuurka, caqiidada ummadda, hab-dhaqmeedka wadatashi; waxanay yeelanaysaa miyuusik u gaar ah oo ka duwan kuwa dalalka kale; waxaana lagu soo saarayaa xeer.
Wax-ka-beddelka ama bedelaadda calanka, astaanta, iyo heesta qaranka, waxa jidaynaya go’aan Golaha Wakulada. Muwaadiniinta Somaliland iyadoon lagu kala saarayn midabka, qabiilka, dhalashada, luqada, lab iyo dastuurma, hantida, mudnaanta, afkaarta iwm, waxay dqstuurka hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman.
Kala sarraynta iyo takoorka ku salaysan issirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku waa reebban yihiin, isla markaa barnaamijyada lagu cidhib tirayo dhaqamada xunxun ee jireenka ah waa waajib Qaran. Ajaanibka dalka Somaliland sharci ku jooga waxay xeerka hortusa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad la siman tan muwaadiniinta, oo ay dastuurkka reebban tahay xuquuqda siyaasiyiga ah ee muwaadiniinta u gaarka ah. Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan.
Tirada xisbiyada siyaasiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Somaliland kama badnaan karaan saddex 3 xisbi. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhawraysaa heshiisyadii ay Dawladdii hore 1o odhan jiray Soomaaliya la gashay shirkad ama dawlad shisheeye, haddii aanu ka hor imanayn danta iyo maslaxadda Jamhuuriyada Soomaaliand. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay mabaadi’ida aayo-ka-talinta ummadaha adduunka.
Waxay aaminsan tahay in khilaafaadka siyaasiga ah ee abuurma lagu xallilo dusub nabadeed iyo wada-hadal; waxay dhawraysaa jiritaanka soohdimaha dalalka kale. Waxay ku dadaalaysaa in colaaddii raagtay oo dhex ooli jirtay dalalka Geeska Afrika lagu beddelo is af-garad iyo isku soo dhawaansho. Dawladda Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo horjeeddaa falalka argagaxis-nimada iwm, ujeeddo kasta ha lahaadeene.
Si loo xaqiijiyo kobcinta wax-soo-saarka, kor-u-qaadidda heerka nolosha, abuuridda goobo shaqo, iyo guud ahaan horumarinta dhaqaalaha dalka, Dawladdu waxay dejinaysaa siyaasadda guud ee dhaqaalaha, oo ku salaysan mabaadi’da suuqa xorta ah iyo is-garabsiga hantida gaar ahaaneed; hantid wadareed, hantida Qaranka iyo maalgelinta shisheeyaha.
Daryeelka iyo ilaalinta maalka iyo awqaaffa penland hantida guud waa waajib saaran Dawladda iyo muwaadiniinta, waxaana geexaya xeer. Khayraadka dabiiciga ah ee dalka waxaa mas’uul ka ah Dawladda-dhexe, waxaanay qaadaysaa tallaabo kasta oo suurta gal ah si loo baadho, loogana faa’iidaysto khayraadka ku jira berriga iyo badda dalka.